युवा विदेश जाँदा गाउँमा बाँदर आतंक बढ्यो : वन्यजन्तु विज्ञ चालिसे [भिडियो अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं – पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा बाँदर आतंक बढेको समाचार आइरहेका छन् । बाँदरले बालीनाली खाइदिएपछि कृषकहरू उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।
केही दिन पहिले त खोटाङमा बाँदर धपाउने भेलामा बाँदर आएको समाचारले चर्चा पायो । देशभर किन बाँदर आतंक बढ्यो ? यसको समाधान के हुनसक्छ ? भनेर लोकान्तरकर्मी गगन अर्यालले वन्यजन्तु विज्ञ प्राध्यापाक डा. मुकेशकुमार चालिसेसँग कुराकानी गरेका छन् ।
कुराकानीका क्रममा डा. चालिसेले युवाहरू विदेश जाँदा गाउँमा बाँदर आतंक बढेको बताएका छन् ।
विस्तृत कुराकानीका लागि हेर्नुहोस्, यो भिडियो :
मंसिर २४, २०७५ मा प्रकाशित
जमराको जुस खाइरहेका भन्छन्–फाइदा भयो, चिकित्सकको सुझाव–औषधिको रुपमा प्रयोग नगर्नुस् !